अवकाशपछि म’रेको मानिसले भन्दा धेरै काम गरेको मुसाको बन्यो संसारभरि समाचार ! – Dailny NpNews
अवकाशपछि म’रेको मानिसले भन्दा धेरै काम गरेको मुसाको बन्यो संसारभरि समाचार !
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष २८, २०७८ समय: १४:४९:३६
एजेन्सी : मंगलबार पूर्वी एसियाली मुलुक कम्बोडियामा एउटा मुसाको नि’धन भयो। मुसाको नि’धन भएको केही बेरमै संसारभरका प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यममा यो समाचारको विषय बन्यो । मागावा नामको त्यो मुसाले बाँचुञ्जेल निकै ठूलो काम गरेको थियो। समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार सन् २०१४ मा अफ्रिकी मुलुक तान्जेनियामा जन्मिएको मागावालाई काम गर्नका लागि सन् २०१६ मा कम्बोडिया पठाइएको थियो।
उसको काम थियो- जमिनमूनि गाडिएका बि-स्फो’टक पदार्थ पत्ता लगाउने। लामो समय गृहयु’द्ध भोगेको कम्बोडियामा अहिले पनि जमिनमूनि गा’डिएका बि-स्फो’टक पदार्थले थुप्रै मानिसको ज्या’न लि’ने गरेका छन्। युद्धका समयमा गाडिएका ल्यान्डमाइन बि-स्फो’ट हुँदा हजारौं मानिस अं’गभंग भएका छन्। कम्बोडियाको जमिनमूनि रहेका बि-स्फो’टक पदार्थ पत्ता लगाउन मागावाले पाँच वर्ष काम गरेको थियो।
यो अवधिमा उसले २४ लाख स्क्वायर फिट जमिनमा बि-स्फो’टक पदार्थ भए/नभएको खोजेको थियो । उक्त जमिनमा ७१ ठाउँमा ल्यान्डमाइन भेटिएका थिए । मागावाको कामको सम्मानमा बेलायतको पशु पन्छी सम्बन्धी काम गर्ने संस्था पिडिएसएले सन् २०२० मा गोल्ड मेडल नै दियो। उक्त संस्थाले ७७ वर्षदेखि विभिन्न पशुपन्छीलाई अवार्ड दिँदै आएको छ। पिडिएसएको गोल्ड मेडल पाउने मागावा पहिलो मुसा हो।
मागावा गत वर्ष जुनमा कामबाट अवकाश भएको थियो। उसले गरेको कामको सम्मानमा उसलाई ‘हिरोर्‍याट’ उपनाम दिइएको थियो। अवकाशपछि पनि मागावा स्वस्थ नै थियो तर गत शनिबार देखि उसको स्वास्थ्यमा सम’स्या आएको थियो। यु’द्ध ग्र’स्त र यु’द्ध बाट तं’ग्रिएका क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा जमिनमूनि बि-स्फो’टक पदार्थ भेटिने गरेका छन्। तर ठूलो भू-भागमा बि-स्फो’टक पदार्थ भए/नभएको पत्ता लगाउनु निकै कठिन काम हो । अनुसन्धानकर्ताहरूले त्यस्ता बि-स्फो’टक पदार्थ पत्ता लगाउन छिटो दौडिन सक्ने र सुँघ्ने क्षमता निकै बलियो भएका मुसालाई प्रयोग गर्न सकिने विधि पत्ता लगाएका थिए।
मागावालाई एपिओपिओ नामक संस्थाले तान्जेनियामा ल्यान्डमाइन पत्ता लगाउने तालिम दिएको थियो। ल्यान्डमाइन पत्ता लगाएबापत मुसालाई मन पर्ने खानेकुरा दिने लगायत विधि अपनाएर तालिम दिइन्छ । मुसाहरूले आधा घन्टामा दुई सय स्क्वायर फिटसम्म जमिन स्क्यान गर्न सक्छन् त्यही काम गर्न मानिसलाई चार दिनसम्म लाग्न सक्छ। मागावाको नि’धनमा एपिओपिओले गहिरो दु:ख व्यक्त गरेको छ।